Filoha Rajoelina tany Diana: « Homena tetibola manokana ny governora » | NewsMada
Filoha Rajoelina tany Diana: « Homena tetibola manokana ny governora »
Nitohy tany Antsiranana ny dian’ny filoha Rajoelina mivady, afakomaly, taorian’ny tany Nosy Be sy tany Mahajanga. Niompana amin’ny lafiny fampandrosoana sy ny ady amin’ny valanaretina ny nambarany, niaraka amin’ny fampitaovana.
«Homena tetibola manokana ianao hotsinjaraina miaraka amin’ireo depiote sy ny ben’ny Tanàna, hanaovana ny asa laharam-pahamehana toy ny lalana sy ny tsena ary ny fotodrafitrasa mamaly ny filan’ny vahoaka», hoy ny filoha Rajoelina Andry, afakomaly tany An­tsiranana. Nametraka tamin’ny fomba ofisialy ny governoran’i Diana, i Daodo Aro­na Marisiky, ny tenany tamin’izany. Nambaran’ny filoha fa tsy maintsy miainga any ifotony raha tiana handroso ny firenena. «Misolo tena ny filoham-pirenena ary manapa-kevitra amin’ny hoentina hampandrosoana ny faritra. Efa voasoritra ao anaty tetibolam-panjakana fa nomena lanja amin’ny fanomezana tetibola sahaza entina mampandroso ny faritra misy azy ny governoram-paritra iray», hoy ihany ny filoha. No­tanisainy tamin’izany ny fanamboaran-dalana satria betsaka ireo efa simba sy potika ary tsy misy fanamboarana. Hovatsina fitaovana fanamboaran-dalana koa ny faritra hahafahana manamboatra ny lalàna mampitohy ny kaominina sy ny distrika. «Ilaina ny fiaraha-miasa eo amin’ny depiote sy ny ben’ny Tanàna mamaritra ny asa hampandrosoana ny faritra tsirairay», hoy ihany ny filoha.
Nitondra tambiny ho an’ireo mpiasan’ny fahasalamana
Etsy andaniny, nitsidika ny hopitaly manara-penitra ao an-toerana ny filoha. Nanolotra tambiny fankaherezana ho an’ireo mpiasan’ny hopitaly rehetra sy miantso firaisankina momba ity ady amin’ny valanaretina Co­vid-19 ny tenany. Nitondra fitaovana toy ny «extracteur d’oxygène», fanafody isan-karazana ihany koa iadiana amin’ny valanaretina. Ma­nam­py ireo ny fitaovana fiarovana ho an’ny mpiasan’ny hopitaly toy ny «blouse», ny “épi”…. Tsiahivina fa miisa 65 ireo mitondra ny tsimokaretina Covid-19 any an-toerana ary miisa telo ireo lavon’ny Covid-19.